कोरोना जतिसक्दो चाँडो नेपालभरि फैलिनुपर्छ भन्दै भने, ‘मर्ने मर्छन बाँच्ने बान्छन्’ (अडिओसहित) - Nepali in Australia
कोरोना जतिसक्दो चाँडो नेपालभरि फैलिनुपर्छ भन्दै भने, ‘मर्ने मर्छन बाँच्ने बान्छन्’ (अडिओसहित)
May 26, 2021 May 26, 2021 autherLeaveaComment on कोरोना जतिसक्दो चाँडो नेपालभरि फैलिनुपर्छ भन्दै भने, ‘मर्ने मर्छन बाँच्ने बान्छन्’ (अडिओसहित)
बारम्बार विवादमा आइरहने ब्यवसायी दुर्गा प्रसाईको दिनहुँ काण्ड सार्वजनिक हुन थालेका छन् । दुई दिन अघि डा गोविन्द केसीका मिडिया संयोजकलाई ध म्की दिएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । फेरी उनले महामारीका बारेमा दिएको अर्को भनाई भाइरल भएको छ । एक जना पत्रकारसंग गरेको उनको कुराकानी भाइरल बनाइएको हो । जसमा उनले महामारी देशभरी नै फैलनुपर्ने बताएका छन् ।
सेतोपाटीले उक्त अडियो सार्वजनिक गरेको छ । जसमा उनले भनेका छन्, को रोना लाग्नुपर्छ, तपाईंलाई। बिएन्डसीलाई एउटा कुरा फाइदा भयो त। बिएन्डसीमा १२ जनालाई भयो नि स्टाफहरूलाई। एक जनाको प्लाज्मा निकाल्दा चार जनालाई हुन्छ।
बिएन्डसी यस्तो स्ट्रङ अस्पताल भयो कि त्यस्ता बिरामीलाई भोलि उपचार गर्न पर्‍यो भने बिएन्डसीले सक्छ। किनभने स्टाफलाई एकपल्ट लागेपछि त अर्कोपल्ट लाग्दैन। यो जतिसक्दो बढी फैलिनुपर्छ क्या, जतिसक्दो बढी। छिटो(छिटो फैलिनुपर्छ क्या। अनि यसको काम कार्यक्रमै सकिन्छ। यो कुरा लेख्दिनोस् मेरै ऊ दिएर, जति सक्दो चाँडो नेपालभरि फैलिनुपर्छ को रोना’
जब पत्रकारले क्या न्स रजस्ता कमजोर प्रतिरोधी भएका मानिस यसबाट म र्न सक्ने कुरा औंल्याउँछन्, उनले फेरी भन्छन्, नपचाउने मान्छे त म र्छ नि। बाँच्नैपर्छ भन्ने छ त ? छैन नि हाहाहाहा, आखिर मृत्यु त मृत्यु नै हो नि।
संसारै म र्छ त अनि यहाँ बाँच्नेले के गरे, म र्ने ले के गरे र यहाँ यो तपाईंलाई म भन्दिऊँ, यो सबै हौवा मात्रै फिँजाएको हो, डब्लुएचओदेखि लिएर जम्मैले। म त पहिल्यैदेखि नेगेटिभ हो यो को रोनाको विषयमा। तपाईंलाई अहिले को रोना भयो भने तपाईं भाग्य सम्झनोस्, राम्रो कुरा हो।’
काठमाण्डौको गोठाटारमा भएको एक भिडियो अहिले सामाजिक सजालमा भाइरल, के थियो विवाद ? (भिडियो)
एक युवाले अर्को मान्छे लाई झु*न्डिएर ह*त्या, मर्ने लाई ब*चाउनु सफल अच*म्म (भिडियो हेर्नुहोस)
‘मिल्ने भए त आफ्नै सास अतिकति दिनु हुन्थ्यो’- आइसियूमा श्रीमतिको अक्सिजन सकिएपछि सन्दीप क्षेत्री (भिडियो हेर्नुहोस्)
May 16, 2021 May 16, 2021 Editor
यस्तो भावुक स्टाटस लेख्दै दाईको न्या’यको लागि ल’डेकी सदिक्षा बास्तोला अमेरिका फर्किइन्-
April 3, 2021 auther